ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှု အစီရင်ခံစာ - First Myanmar Investment Public Company Limited
ကုမ္ပဏီအုပ်စုအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို အလေးထား၍ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိပြီး တာဝန် ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးအလေ့အကျင့်များဖြင့် ကုမ္ပဏီရှယ်ယာရှင်များနှင့် အများပြည်သူအားလုံးအ တွက် မျှတ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသော တန်ဖိုးထားမှုများအားဖန်တီးနိုင်ရန် စီမံခန့် ခွဲပါသည်။ ဤ နှစ်ပတ် လည် အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၉ စက်တင် ဘာလတွင်ကုန်ဆုံးသော ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီအုပ်စုက လက်ခံအ တည်ပြု ခဲ့သော ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ကော်ပို ရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုမူဘောင်၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများနှင့် စံချိန်စံ နှုန်းများ (စုစုပေါင်းအားဖြင့် “ကျင့်ဝတ်” ဟု ခေါ်ဆိုပါမည်။) ကို ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ စ၍ ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာတွင်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အရှိဆုံးကုမ္ပဏီ
အဆင့် (၁) မှ (၃) အတွင်း FMI မှ နှစ်စဉ် ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စာရင်းဝင်အများပိုင်
အကောင်းဆုံးဆုကို Yangon Stock Exchange ထံမှရရှိသည်။
အခြေခံမူ (၁၀) ချက်ဖြင့်
လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုအား တိုးမြှင့်နိုင်ရန်
Network တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
FMI Governance Structure
FMI ကုမ္ပဏီ သည် ကုမ္ပဏီအုပ်စု ၏ အုပ်ချုပ်မှုမူဘောင်၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စံနှုန်းများကို အထောက်အကူပြု ပေးထားသည့် လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီခွဲများကို ဦးစီးရန် တာဝန်ရှိသော လွတ်လပ်သော CEOs များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူကမှ အခွင့်အာဏာများစွာကို တစ်ဦး တည်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းမျိုးမရှိစေရန်အတွက် အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီခွဲများ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို တိတိကျကျ ခွဲခြားထားပါသည်။ စာရင်းစစ် ကော်မတီ (Audit Committee) ၊ အမည် တင်သွင်းရေးကော်မတီ (Nominating Committee) ၊ လုပ်အားခနှင့်ချီးမြှင့်ငွေသတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ (Remuneration Committee) (စုစုပေါင်းအားဖြင့် “ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ကော်မတီများ” တို့အား အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာများဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
တက်ကြွမှုရှိပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို ကောင်းစွာသိရှိထားသော၊ တာဝန် ယူမှုရှိပြီး လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကို ကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ ယုံကြည်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီအား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ရေရှည်အောင်မြင်မှုနှင့် ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းဆောင်တားများကို ကြီးကြပ်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲ မှု အဖွဲ့သည် (Management) သည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က ချမှတ်ထားသောမူဝါဒ များ မဟာဗျူဟာများနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စီမံခန့်ခွဲ ရန် တာဝန်ရှိပြီး ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို ပြန်လည်တာဝန်ခံရပါသည်။ ထို့အပြင် ဒါရိုက် တာ အဖွဲ့သည် ထိရောက်မှုရှိသော Risk Management မူဘောင်တစ်ခုကို ချမှတ် ၍ ထိုမူဘောင်က ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့်ပတ်သက်သော ဆုံးရှုံးနိုင် ခြေများကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ ၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်။
(က) ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၎င်းင်း၏ရည်မှန်းချက်များကို ပြည့်မီစေနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောဘဏ္ဍာရေးနှင့် လူသားအရင်း အမြစ်များရရှိစေရန်၊ စွန့်ဦးတီထွင်မှု ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ရည်မှန်းချက်များကိုချမှတ်ရန်၊
(ခ) ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ရှယ်ယာရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက် ကျရောက်နိုင်သော ဆုံးရုံးနိုင်ခြေများကို သိမြင်နိုင်ရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ထိရောက်ပြီးသတိရှိသော ထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်သော မူဘောင်တစ်ရပ်ကိုချမှတ်ရန်၊
(ဂ) စီမံခန့်ခွဲသူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ရန်၊
(ဃ) အဓိကအရေးကြီးသော အကျိုးသက်ဆိုင်သူများကိုရှာဖွေပြီး ၎င်းင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီအပေါ်ရှုမြင်ချက်သည် ကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သိက္ခာကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်၊
(င) ကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးများနှင့် စံနှုန်းများ (ကိုယ်ကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများအပါအဝင်) ကို သက်မှတ်ပေးရန်၊
(စ) ရှယ်ယာရှင်များနှင့် အခြား အကျိုးသက်ဆိုင်သူများအတွက် ထမ်းဆောင် ရမည့် တာဝန်များကို နားလည်ရန်နှင့်ဖြည့်ဆည်းပေးရန် နှင့်
(ဆ) မဟာဗျူဟာများချမှတ်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုပါ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု စေရန်အတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန်။
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ရန်တာဝန်ရှိပြီး ရှယ်ယာရှင်များအတွက် ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စရပ်များကို စီမံခန့်ခွဲ ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တည်ဆောက်ပုံတို့ကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ အပြည့်အဝတာဝန်ယူရပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲသူများသည် ဒါရိုက် တာအဖွဲ့ကို တာဝန်ခံရန်လိုအပ်ပြီး ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကချမှတ်ထားသော မဟာဗျူ ဟာများ၊ မူဝါဒများနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် အုပ်ချုပ်မှု များအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်နေသော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် များကို သုံးသပ်နိုင်ရန်နှင့် စီမံနိုင်ရန်အတွက် ထိရောက်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှု အန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းမူဘောင်ကို ချမှတ်ထားပါသည်။
တိကျမှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ထံသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီပေးပို့ရန် အထူးအရေးကြီးသည်ကို စီမံ ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ သိရှိနားလည်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များအတွက် တိကျရှင်းလင်းသော ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေး အကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာများကို ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် ရှယ်ယာရှင်များထံသို့ မထုတ်ပြန်မီ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ကြိုတင်ဖတ်ရှုအတည်ပြု ချက်ပေးရသည်။
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ဝင်ငွေနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေအပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို စစ်ဆေးသုံးသပ်ရသည့်အပြင် အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက် အမြတ်ဝေစုကြေညာခြင်းကို အကြံပြုခြင်း၊ ဘဏ္ဍာ ရေးအစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အတည်ပြုချက်ပေးနိုင်ရန် ရောင်းချခြင်း (သို့) ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်းတို့ကို အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပေးရပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ခြင်းကို အထူးအာရုံစိုက်ရမည့် စီမံကိန်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ မဟာ ဗျူဟာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် အထူးစီမံကိန်းများအပေါ်တွင် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အား အကြံပေးဖြေရှင်းပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဦးသိမ်းဝေ (ခ) Mr. Serge Pun သည် ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပါသည်။
အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိမ်းဝေ က ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှု၏ အဆင့်အတန်းကို ပိုမိုမြင့်မား စေရန်ရည်ရွယ်၍ မူဝါဒ များ နှင့် နည်းဗျူဟာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုကူ ညီကာ ယင်းမူဝါဒများနှင့် နည်းဗျူ ဟာများကိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုလျက် ကုမ္ပဏီအတွက် ခိုင်မာ သော ခေါင်းဆောင် မှုနှင့် ရည်မှန်းချက်ဖြင့် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဦးသိမ်းေ၀ သည် အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူ ရာတွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အတွင်းနှင့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့နှင့် စီမံအုပ်ချုပ် သူ များအကြား အပြုသဘော ဆောင် သော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်ထွန်းစေရန် တိုက်တွန်း အားပေးသည့် အနေဖြင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်သူများအကြား သတင်းအချက်အလက် များ၏ အရည်အသွေး၊ အရေ အတွက်နှင့် အချိန်နှင့် တပြေးညီ စီးဆင်းမှုတို့ကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စီမံအုပ်ချုပ်သူများ ထံမှရရှိသော သတင်း အချက် အလက်၊ အကြံဉာဏ်များ ကိုအခြေခံ၍ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးအတွက်အစည်းအဝေး ခေါင်းစဉ်များ ၊ အကြောင်း အရာ များချမှတ်ခြင်း တ့ိုအပါအဝင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းများကို ကဏ္ဍမျိုးစုံ၊ ရှုထောင့် မျိုးစုံမှ ထိရောက်မှုရှိစေရန် အဓိကတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပါ သည်။ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အတွင်း ပွင့်လင်းမြင် သာမှုရှိပြီး ဆွေးနွေး ဖလှယ်သော အလေ့အထတစ်ရပ်ကို မြှင့်တင်ပေး ရန်၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် များ ချမှတ်ရန်အတွက် လုံလောက်သော အချိန်ရှိအောင် လုပ်ဆောင် ပေးခြင်းနှင့် အမှုဆောင် မဟုတ် သော ဒါရိုက်တာ များ၏ လုပ်ဆောင် ချက်များ ထိရောက်မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေး သည်။ နှစ်ပတ်လည် နှင့် ရှယ်ယာရှင် အစည်းအဝေး များတွင် ရှယ်ယာရှင်များ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ များ အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့် ဆွေးနွေးမှု များရရှိ အောင် အဓိကလုပ် ဆောင် နေသူ ဖြစ်သည်။
စာရင်းစစ် နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှု အန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ (ARMC)
ARMC ကော်မတီကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ရှိ အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကော်မတီသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှု အန္တရာယ်၊ ဥပဒေ လိုက်နာမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အုပ်ချုပ်မှု မူဘောင်တို့နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များတွင် လွတ်လပ်စွာ အကြံပေးသည့်အပြင် ဘဏ္ဍရေး ရှင်းတမ်းများနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် အခြားလိုအပ် သည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကိုပါ လုပ်ဆောင်ရသည်။ ARMC သည် နှစ်ဝက်တိုင်း နှင့် နှစ်ပတ်လည် ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန် ချက်များကို ဘုတ်အဖွဲ့သို့ မတင်ပြမီ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊ အထူးသဖြင့် စတော့ အိတ်ချိန်းနှင့် စဉ်းမျဉ်းပြဋ္ဌာန်း ချက်များ အရ ပြောင်းလဲထားသည့် စာရင်းကိုင် မူဝါဒနှင့် အလေ့အထများ၊ ဆုံးရှုံးနိုင် ခြေရှိမှု အန္တရာယ်၊ ငွေစစ်စာရင်းနှင့် စာရင်း ကိုင် စံချိန်စံညွှန်းများအပေါ် အာရုံစိုက် စစ်ဆေးသည်။
ARMC သည် စီမံအုပ်ချုပ်သူအဖွဲ့နှင့် အလုပ်တွဲလုပ်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များ ပေးခြင်းဖြင့် မူဝါဒများကို ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း၊ ရေးဆွဲခြင်းတို့်ကိုပြလုပ်ကြပါ သည်။ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်များကို ရရှိနိုင် ရန် အတွက် စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားသော ဆောင်ရွက်ချက်များဖြင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ချေ ရှိသော နေရာများ အား ဖြေရှင်း ခြင်း၊စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရပါသည်။ ARMC သည် ကုမ္ပဏီ၏ အနာဂတ် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ မဟာဗျူဟာ နှင့် လက်ရှိဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများနှင့် ထိစပ်မှုအခြေအနေများကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ကို အကြံ ပေးပါ သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ ARMC သည် တည်ဆဲဥပဒေ အရ၊ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ငွေချေးသက်သေ ခံလက်မှတ် စည်းမျဉ်းအရ လိုအပ် သောတာဝန်များကို တာဝန်ယူလေ့ရှိပြီး ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့က အချိန်အားလျော်စွာ ချမှတ်ထားသော ARMC က တာဝန်ယူရန်လိုအပ်သော ပြင်ဆင်မှု များကိုလည်း ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
လုပ်အားခနှင့်ချီးမြှင့်ငွေသတ်မှတ်ရေး ကော်မတီ (RC)
လုပ်အားခနှင့် ချီးမြှင့်ငွေသတ်မှတ်ရေးကော်မတီကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ရှိ အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကော်မတီသည် ကုမ္ပဏီ၏လုပ် အားခနှင့်ချီးမြှင့်ငွေ သတ်မှတ်ခြင်းပေါ်လစီ၊ အဆင့်အတန်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် များကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို အကြံပေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးရပါသည်။ ကော် မတီသည် ကုမ္ပဏီ၏ မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အခကြေးငွေဆိုင်ရာအစီအစဉ်များဖြင့် လုပ်ဆောင် ပေးခြင်း၊ ထို့အပြင် ဒါရိုက်တာ များ၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဓိကတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ တာဝန်မှ ရပ်ဆိုင်း သည့်အခါတွင်ဝန်ဆောင် မှု သဘောတူညီချက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရာ၌ ထိုစာချုပ်ထဲတွင် မျှတပြီး ကြောင်းကျိုး ဆီလျော်သော အချက်များ ပါဝင် စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်။
RC သည် ကုမ္ပဏီထံသို့ ထည့်ဝင်မှုပမာဏနှင့် ထမ်းဆောင်ရသည့် တာဝန်များနှင့် သင့်လျော်သော ခံစားခွင့် လစာများကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးပါသည်။ လုပ်ငန်းအ ခြေအနေ၊ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော အခြား သော ကုမ္ပဏီများ ၏စံနှုန်းများ၊ ကုမ္ပဏီ၏လုပ် ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တစ်ဦးချင်းစီ ၏ စွမ်းဆောင်ရည် စသည့် အချက်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပြီး သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ RC သည် ဒါရိုက်တာများက ကုမ္ပဏီအား အောင်မြင်စွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်မူတည်၍ ဒါရိုက်တာလစာ၊ ခံစားခွင့်၊ အပိုဆုကြေးငွေ၊ ရွေးချယ်ခွင့်၊ ရှယ်ယာအပေါ် အခြေခံသည့် မက်လုံးများ၊ ဆုကြေး များ၊ ပစ္စည်းအကျိုးခံစားခွင့်များ အစရှိသောခံစားခွင့်များ ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။
အမည် တင်သွင်းရေးကော်မတီ (NC)
အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေးကော်မတီသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နှင့် သူ၏အဖွဲ့ဝင်များကို ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရဌာန နှင့် ပညာရေး အစရှိသည့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် အတွေ့အကြုံ ရှိသူများနှင့် မတူကွဲပြားသော ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သည့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အဖြစ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အတွက် သင့်တော်သော အရည်အချင်း၊ စွမ်းရည်နှင့် အတွေ့ အကြုံ ရှိသောသူများကို ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ပေးရသည်။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးချင်းအား ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် နှုတ်ထွက်ခြင်းတို့အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တစ်ခုလုံး၏ အတည်ပြုချက်ကို ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ရေရှည် တိုးတက်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုတို့ကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် ရေရှည် တည်တံ့သော ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု ၊ တီထွင် ဆန်းသစ်မှု အတွေးအမြင်များကို ရရှိနိုင်ရန် အတွက် ကုမ္ပဏီသည် မတူကွဲပြားသော စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ ဗဟု သုတ များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို တစ်ဦးချင်းပိုင်ဆိုင် ထားသည့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် များ၏ စုပေါင်းစွမ်းအားကို အခြေပြုသော ဒါရိုက် တာအဖွဲ့ကို မတူကွဲပြားသည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ထားရှိရန် ခိုင်မာစွာလက်ခံထားပါသည်။
NC သည် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အရွယ်အစားနှင့် (ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိပညာ၊ အတွေ့အကြုံနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှု အပါအဝင်) ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုတို့ကို ပုံမှန်သုံးသပ်ပြီး ဒါရိုက်တာများအား အပြောင်း အလဲပြုလုပ်နိုင်ရန် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အား ထောက်ခံချက်များ ပေးပါသည်။ ဤကော်မတီသည် အနည်းဆုံး (၃)နှစ်ပြည့်တိုင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခြင်း၊ ပြန်လည်အဆိုပြုခြင်း နှင့် ပြန် လည် ခန့်ခြင်း တို့ အား ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် အမည်စာရင်းပြန် လည်တင်သွင်းစေရန် ကြီးကြပ်ရပါသည်။ NC သည် ဈေးကွက်အတွင်း ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ထိရောက်သည့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုစွမ်းရည် ဆက် လက်ရှိနေစေရန်မျှော်မှ န်းကာ ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်မှု လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အလုပ်အမှုဆောင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ များအား ပြန် လည်သုံး သပ်မှု ကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာများက ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် အများစုဖြစ်နေသော ကြောင့် အားကောင်းသော အမှီအခိုကင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အတွင်းရှိ အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာများသည် ၎င်းတို့၏ အတွေ့ အကြုံများ သဘောထားများဖြင့် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်မြော်မြင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ထိုအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်ရန်လိုအပ်ပါက ထိုဒါရိုက်တာကို မဲပေးခွင့်မပြုသကဲ့သို့ ပါဝင်ပက်သက်ခွင့်မပြုဘဲ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ပါဝင်သူ အားလုံး၏အကျိုး စီးပွား နှင့်အညီဖြစ်ပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်က ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လွှမ်းမိုး နိုင်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီသည် အသစ်ခန့်အပ်သော ဒါရိုက်တာများကို ကုမ္ပဏီများအုပ်စု၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဌာနတွင်းအုပ်ချုပ်မှုများ၊ စီမံအုပ် ချုပ်ပုံ အလေ့အကျင့်များနှင့် နေသားကျစေရန် လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းကို ပြုလုပ်ပေး လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းင်းသင်တန်းအစီအစဉ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရောက်လေ့ လာခြင်း၊ ကုမ္ပဏီများအုပ်စု၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ မဟာဗျူဟာမြောက်သော အစီအစဉ်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ခြင်း၊ အဓိကစီမံအုပ်ချုပ်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်း၏ အဓိကနယ်ပယ်များအကြောင်း အသိပေးပြောကြားခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များကို သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် Baker & McKenzie မှ လာရောက်ပို့ချသော မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီ များ ဥပဒေသစ်အောက်တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် ဒါရိုက်တာများနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများ သင်တန်းကို FMI ၏ ဒါရိုက်တာများ တက်ရောက်နေခြင်း
လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနေစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်စေရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ဒါရိုက်တာများအား နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်ကြပါရန် တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
ဒါရိုက်တာ (၁၁)ဦးနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များတွင် အမှုဆောင် မဟုတ်သောဒါရိုက်တာ (၇)ဦးနှင့် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ (၃)ဦးပါဝင်ပါသည်။အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာများသည် စွန့်ဦးတီထွင်မှု၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ပညာရေးနှင့် ဥပဒေပညာရပ်များတွင် နောက်ခံအတွေ့ အကြုံများစွာ ရှိသောသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ထိရောက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် လူအများလေးစားရသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ကို ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရှုထောင့်မျိုးစုံမှ အကျိုးခံစားရပါသည်။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးခြင်းစီ၏ အရည်အသွေး များကိုသိရှိလိုပါက နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များကဏ္ဍတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာများအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဦးသိမ်း‌‌ဝေ (ခ) Serge Pun
FMI ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှု
စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များပေါ်တွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ သဘောထားအမြင်များကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများတွင် ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေး သံုံးသပ်ရန် တိုက်တွန်းအားပေးပါသည်။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် မတူညီသောအမြင်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကို ဖန်တီးပြင်ဆင်ထားပါသည်။ အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာများသည် မတူညီသော အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံမှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုရန် ကုမ္ပဏီကအားပေးပါသည်။ အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာများအနေဖြင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများပြင်ပတွင်လည်း ကုမ္ပဏီကိစ္စရပ် များနှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေး နိုင်ကြပါသည်။
ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ
Last – Re-election
U Theim Wai @ Serge Pun 12 Sep 2004 2016 Chairman - - -
U Tun Tun 17 Nov 2009 2017 Member - - -
U Myat Thin Aung 31 Jul 1992 2017 Member - Chairman -
U Than Aung 31 Jul 1992 2017 Member Member - Member
Prof. Dr. Aung Tun Thet3Dec 2013 2018 Member - - Chairman
U Kyi Aye5Nov 2015 2016 Member Chairman Member -
U Linn Myaing2Jul 2012 2018 Member - - -
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးများနှင့် ဒါရိုက်တာများ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးများ ကျင်းပမည့် နေ့စွဲကို ဒါရိုက်တာများအားလုံး ဆီသို့ ကြိုတင်၍အကြောင်းကြားပါသည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သည့် အရေးကြီး ကိစ္စရပ်များ ပေါ်ပေါက်သည့်အခါတွင် အစည်းအဝေးများကို ဆင့်ခေါ်လေ့ရှိပြီး အစည်းအဝေးကို ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်တွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီကို အကျိုး သက်ရောက်နိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို ကြိုတင် စဉ်းစားနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ဒါရိုက်တာများထံသို့ အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ ကြိုတင်ပေး ပို့ထားရပါသည်။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် နှစ်ပတ်လည်အထွေ ထွေအစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်နေ့ကို ဆုံးဖြတ်ပေးရန်တွေ့ဆုံပြီး ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ကော်မတီများသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးများ မပြုလုပ်မီတွင် ကြိုတင်တွေ့ဆုံ လေ့ရှိကြပါသည်။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက် မပြုလုပ်ခင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ကော်မတီများ၏ ထောက်ခံချက်များ အဆင်သင့် ရှိနေရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Total number of meetings held21 1 1 1
U Theim Wai @ Serge Pun2N.A. N.A. N.A. 1
U Tun Tun2N.A. N.A. N.A. 1
Daw Zarchi Tin *2N.A. N.A. N.A. N.A.
U Myat Thin Aung2N.A. N.A. 1 1
U Than Aung21 1 N.A. 1
Prof. Dr. Yi Yi Myint **21 N.A. 1 1
Prof. Dr. Aung Tun Thet2N.A. 1 N.A. 1
U Kyi Aye21 N.A. 1 1
U Linn Myaing2N.A. 1 N.A. 1
အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုမှတ်တမ်း ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ – ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ)
* ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တွင် ဒေါ်ဇာခြည်တင်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ နှုတ်ထွက်ခြင်း စတင် အသက်ဝင်မည် ဖြစ်သည်။
Band & Name of Director
Variable Component Or Bonuses (%)
Benefits-in-kind, Allowance And
MMK 250 Million – MMK 520 Million
MMK 140 Million – MMK 250 Million
* Include the shares award as per the Company’s Employee Share Incentive Scheme.
Non-Executive Director 10,000,000 Nil
Fee for Appointment to Audit and Risk Management Committee
Committee Chairman 2,000,000 Nil
Committee Member 1,000,000 Nil
Fee for Appointment to Nominating Committee and Remuneration Committee
Committee Chairman 1,500,000 Nil
The fee structure of the Non-Executive Directors for FY2019.
အစုရှယ်ယာ ၅% နှင့် အထက် ပိုင်ဆိုင်သော အစုရှယ်ယာရှင်များ
THEIM WAI @ SERGE PUN 9,008,506 33.23%
YANGON LAND CO., LTD. 8,001,533 29.51%
ကုမ္ပဏီသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများ၏ စာရင်းများကို စစ်ဆေးရန်အတွက် Myanmar Vigour & Associates Limited အား ၎င်း၏ ပြင်ပစာရင်းစစ် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရွေးချယ်ထားပါသည်။ ထိုပြင်ပ စာရင်းစစ်အဖွဲ့အစည်း၏ အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်သော နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ၏ လွတ်လပ်သော စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ ကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အတွင်းလူများ အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအား တားမြစ်ခြင်း
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ထား သော ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အရေး ကြီး သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိထားသော ဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် အတွင်းလူများ အနေဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း မပြုရသေးသော အရေးကြီးသည့် သတင်းအချက် အလက်များကို အခြေခံ၍ ကိုယ်ပိုင် (သို့) တခြားသူအ တွက် အစုရှယ်ယာများ ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားပါသည်။ အခြားပြင်ပမှ သူများအား အစုရှယ်ယာများ ဝယ်ယူရောင်းချရန် အကြံပေးခြင်း နှင့် အရေးကြီးသော သတင်းအချက်အလက်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်းတို့ကိုလည်း တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားပါသည်။
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အတွင်းလူများ အစုရှယ်ယာ ရောင်းဝယ်မှုကို ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက် ကုမ္ပဏီတွင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချမှတ်ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းတို့ကို အချိန်အားလျော်စွာ ပြုလုပ်ရပါမည်။ ဝန်ထမ်းများကိုလည်း အတွင်းသတင်းများ အများပြည်သူထံသို့ မတော်တဆ မပေါက်ကြားစေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။